Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိလိန္ဒပဥှာ ( မိလိန္ဒမင်းကြီး နှင့် အရှင်နာဂသိန် အမေးအဖြေ)
Started this discussion. Last reply by Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ မေ 12, 2014. 14 Replies4Likes
ကောင်းမှုမြတ်နိုး ကောင်းအောင်ကြိုးကာ ကောင်းကျိုးကိုယ်မှာ တည်ပါစေသား။
phyuthi သည်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s ၏ 'တရားစာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ သည်Thet Thet Oo's ၏ '"သောတာပန် တစ်ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Mr.VC သည်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s ၏ 'နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မေ 12, 2014
nyansoe သည် Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s၏ 'နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
nyansoe သည်Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s ၏ 'နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မေး။ ။ ဆရာတော်ဘုရား ... တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပါသည်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လူ့ဘဝ၌ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ခေါ်ပါသလား။ဘဝကုန်ဆုံးပြီး ဘာမှမရှိခြင်းကို ခေါ်ပါသလား။ ကောင်းကင်မှာ ရှိပါသလား။(မစိုးမိုးသူ၊ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)ဖြေ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိတာကို နိဗ္ဗာန်လို့ မခေါ်ပါဘူး။အဘာဝပညတ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ဟာ ကောင်းကင်မှာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ဟာ အမှန် ရှိပါတယ်။ သို့သော် ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ နားထွေးသွားပါသလား။ဆိုလိုတာက…See More
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ အန္တရာယ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ သည်ဉာဏ်လင်းမြို့'s ၏ '★ ဥပုသ်သီလနှင့် ပတ်သက်၍★' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ postedadiscussion
<p>မေး။ ။ ဆရာတော်ဘုရား ... တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပါသည်။<br/> နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လူ့ဘဝ၌ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ခေါ်ပါသလား။<br/> ဘဝကုန်ဆုံးပြီး ဘာမှမရှိခြင်းကို ခေါ်ပါသလား။ ကောင်းကင်မှာ ရှိပါသလား။</p> <p>(မစိုးမိုးသူ၊ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)</p> <p>ဖြေ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိတာကို နိဗ္ဗာန်လို့<br/> မခေါ်ပါဘူး။</p> <p>အဘာဝပညတ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။</p> <p>နိဗ္ဗာန်ဟာ ကောင်းကင်မှာ…See More
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ joined A BuddhismworldAdmin's group
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ သည်thein wai's ၏ 'အရှင်နန္ဒာဘိဝံသ၏ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို လမ်းညွှန်မှု။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵ replied to Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s discussion 'မိလိန္ဒပဥှာ ( မိလိန္ဒမင်းကြီး နှင့် အရှင်နာဂသိန် အမေးအဖြေ)'
"ဒီလာခ့်လေးကနေကော ကြိုးစားကြည့်ပါဦး ...မရရင် ပြောနော်..."
Thet Thet Aung liked Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s discussion မိလိန္ဒပဥှာ ( မိလိန္ဒမင်းကြီး နှင့် အရှင်နာဂသိန် အမေးအဖြေ)
mun mun aung replied to Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`*•မြတ်ပုလဲဖြူ¸.•*´Ƹ̵̡Ӝ̵'s discussion 'မိလိန္ဒပဥှာ ( မိလိန္ဒမင်းကြီး နှင့် အရှင်နာဂသိန် အမေးအဖြေ)'
"mun2aung@gmail.com စာအုပ်ဒေါင်းလို့မရပါ။ အီးမေးလ်မှတဆင့် ပို့ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးပါ။"
ဒီဘလော့ကို မေ 12, 2014 တွင်4:19pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိတာကို နိဗ္ဗာန်လို့
နိဗ္ဗာန်ဟာ ကောင်းကင်မှာ မရှိပါဘူး။ ဘယ်မှာမှ မရှိပါဘူး။ နိဗ္ဗာန်ဟာ အမှန် ရှိပါတယ်။ သို့သော်…
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 29, 2011 တွင်3:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
သိစရာအားလုံးကို သိတတ်သောသဘောသည် စိတ် မည်၏။ အဆင်းကိုမြင်လျှင် သိခြင်း၊ အသံကို ကြားလျှင် သိခြင်း၊ အနံ့ကိုနံလျှင် သိခြင်း၊ အရသာကို စားလျှင် သိခြင်း၊ အတွေ့အထိကို တွေ့ထိလျှင် သိခြင်းနှင့် ထို ငါးမျိုးမှ တပါးသော တရားများကို… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 24, 2011 တွင်4:08pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments0Likes
ဒီတစ်ခါတော့ ဟိုအရင်က တင်ပေးခဲ့တဲ့ သိကြားမင်းအကြောင်းပို့စ်လေးရဲ့ အဆက်လို့ ဆိုရမယ့် တာဝတိံသာ နတ်ပြည်နဲ့ စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည် (၂) ပြည်ကို အုပ်ချုပ်စိုးစံရပုံလေးပါ …….
သိကြားမင်း (ကိုမာဃ)နဲ့ သူ့ရွာသူရွာသားများ နတ်ပြည်ရောက်တော့ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ရယ် လို့ မရှိသေးပဲ မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်ကနေ အောက်အထိ အသူရာဆိုတဲ့ နတ်တွေက ကြီးစိုးနေကြ သည်။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဝေပစိတ္တိနတ်မင်းကြီး အမှူးပြုတဲ့ အသူရာနတ်တွေကသာ အုပ်စိုးနေ ကြသည်။ ထိုအသူရာနတ်များသည် ခပ်ကြမ်းကြမ်း၊ ခပ်ရမ်းရမ်း ကာမဂုဏ်တွေကို ခုံမင်ခံစားတတ် သော… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆရာတော် ဦးဗုဓ်
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 20, 2011 တွင်3:04pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
( ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆရာတော် ဦးဗုဓ် )
ဆရာတော်သည် သီလ သမာဓိ ပညာ ဂုဏ်ရည်ကြောင့် အင်းဝနှင့် အမရပူရ နေပြည်တော်တွင် ဘုရင်အကိုးကွယ်ခံ ရာဇဂုရု ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘကြီးတော်နှင့် သာယာဝတီမင်း လက်ထက်တွင် အထူးထင်ပေါ်ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ညောင်ကန်ရွာ ဇာတိဖြစ်သည်။ ဗုဓ်စ, ဗုဓ်လယ်, ဗုဓ်ဆုံး ဟူ၍ ဆိုရိုးတွင်သည်အထိ စာပေအရာတွင် တတ်သိလှသည်။ ပါဠိ၊ နိဿယ၊ စကားပြေ၊ ကဗျာ၊ သတ်ပုံ၊ အမွှန်းဂါထာစုံ၊ စာမျိုးစုံ ပြုစုခဲ့သည်။ ရဟန်း ရှင် လူ အားလုံး လေးစားကြည်ညိုကြရသည့် ဆရာတော်သည် ပေစာကို လက်တွင်ကိုင်ရင်း…
8:24pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 8, 2016, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:44pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 28, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:50pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 12, 2011, တွင် kaunghtet မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:44pm အချိန်အောက်တိုဘာ 31, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:03pm အချိန်အောက်တိုဘာ 12, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:58pm အချိန်စက်တင်ဘာ 24, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:56pm အချိန်စက်တင်ဘာ 6, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:52pm အချိန်သြဂုတ် 10, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:12am အချိန်ဇူလှိုင် 28, 2011, တွင် နီနီဟန်နီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေးရေ...ခုလိုပို့ ပေးတာကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဒီထက်မကသာသနာ့အကျိုးသယ်ပိုးနိူင်ပါစေကွယ်။
3:38pm အချိန်ဇူလှိုင် 26, 2011, တွင် နီနီဟန်နီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမရေ..အမရဲ့ မေးလ်ကတော့ heaven.peace2@gmail.com